Zeorzia: Ny Paikadin’Ireo Vehivavy Anatinà Vohitra Miady Manoloana Ny Fitsaratsaram-poana Ny Mahalahy Sy Ny Mahavavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2016 15:11 GMT
Vehivavy any Tirdznisi, Zeorzia. Dikasary avy aminà lahatsary navoakan'ny Chai-Khana.org ao amin'ny Youtube.
Ity manaraka ity dia dika iray avy aminà lahatsoratry ny mpiara-miasa aminay izay nivoaka voalohany indrindra tao amin'ny vohikala Chai-Khana.org.
I Tirznisi (soratana koa hoe Tirdznisi) dia vohitra any amin'ny sisintany manasaraka ny repoblika Sovietika taloha an'i Zeorzia amin'i Osetia Atsimo, faritany nihataka taminy.
Nandritra ny ady tamin'ny 2008 izay nampifanandrina ny miaramila teo amin'ny lafiny roa an'ilay sisintany, ka nampiady ny tsirairay ary nirotsahan'i Rosia an-tsehatra niaraka aminà hery tafahoatra teo amin'ny lafiny Osetia Atsimo, dia niala ny vohitra ny vahoaka mba hitsoaka ny ady.
Taorian'ny niverenany tao amin'ny vohitra, vondrom-piarahamonina miaritra anaty olana ara-tsosialy sy ara-toekarena nefa vitsy vahaolana eo am-pelatànana no hitan'i Mariam Buchukuri, mponina tao an-toerana. Niaina zavatra sahala amin'izay ihany koa ireo vondrom-piarahamonina manodidina.
Nanapa-kevitra ny hanangona olona mitovy fijery izy ary hikatsaka valinteny ho an'ireo olana maika atrehan'ny vahoaka ao an-toerana, indrindra ireo vehivavy izay mijaly amin'ny fomba tsy mifanentana noho ny ady. Nanatanteraka fihaonana any amin'ny trano fonenan'ny tsirairay izy ireo. Taty aoriana dia nametraka fikambanana ry zareo ary nanofa birao.
Ny biraon'ny Famatsian'ny Vondrom-piarahamonina Shida Kartli ho an'ny Fandriampahalemana sy ny Fivoarana dia hita eo amin'ny arabe anelanelan'i Tirdznisi sy i Ditsi, vohitra hafa ao amin'ilay sisintany hipoka izay lasa faritra fiadiana tanatin'ireo taona nialoha ny fahaleovantenan'i Zeorzia manoloana an'i Môskoa. Mihaona aty isan'andro i Mariam sy ireo vehivavy hafa mpikambana.
Tamin'ny voalohany, “ilay biraon'ny vehivavy tsy manambady” no niantsoan'ireo mponina tao an-toerana an'io birao io, satria ny ankamaroan'ireo vehivavy miasa ao amin'ny Famatsian'ny Vondrom-piarahamonina dia tsy manambady, ary maro ireo mponina no nino fa tsy misy ilàna azy ny vehivavy tsy manambady.
Saingy amin'izao dia vonona kokoa ireo mponina hanaiky ny fanampiana atolotr'i Mariam sy ny biraony ho an'ny vondrom-piarahamonina, na eo amin'ny resaka mikasika ny tetikasany manokana izany na eo amin'ny asany miaraka amin'ny governemanta ao an-toerana enti-mamaha ny olan'ny vehivavy.
Ity ambany ity ny tantaran'izy ireo, miaraka aminà dikateny Anglisy sy Rosiana: